Izmir | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
IzNM မြို့တော်ဝန်Tunç Soyer၊ 1 နိုဝင်ဘာပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည် mukhtars များအတွက်ကြေငြာခြင်းအတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ Nzmir Metropolitan မြူနီစီပယ်သည် 2015 မှစ၍ Mukhtar's Day ကိုကျင်းပခဲ့ပြီး organizedzmir တွင်ကျင်းပသောပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ [ပို ... ]
Izmir Metropolitan Municipality, 29 အောက်တိုဘာသမ္မတနိုင်ငံပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခကြေးငွေ 1 တစ်ပြားမှဖြစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ တူရကီ, အောက်တိုဘာလ 29 2019 အင်္ဂါနေ့, xnumx'nc သမ္မတနိုင်ငံတည်ထောင်၏နှစ်ပတ်လည်နေ့ကျင်းပပါလိမ့်မယ်။ Izmir ရှိအမျိုးသားအားလပ်ရက် [ပို ... ]
မြူနီစီပယ်စွန့်ပစ်၏ 2,1 တန်ချိန်သန်းခုနှစ်တွင် Izmir အတွက်စုဆောင်းခဲ့သည်
Belediyelere uygulanan 2018 yılı Belediye Atık İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre İzmir’de belediyelerin tamamında atık hizmeti verildiği tespit edildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü’nün verdiği bilgiye göre İzmir’de atık [ပို ... ]
İzmir’de toplu ulaşımda yeni bir dönem başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in otobüslerde kadın şoförlerin de görev yapması yönündeki kararının ardından harekete geçen ESHOT Genel Müdürlüğü, sınavları başarıyla geçen 17 [ပို ... ]
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de yaşanan en büyük yangınlarından birinin yaralarını sarmak için kampanya başlattı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in daveti üzerine hem felaketi yerinde görmek, hem de gerekli kararları [ပို ... ]
OK ကိုရက်စွဲအဘို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု 'ပု Ormanizm' '
Kent tarihinde yaşanan en büyük orman yangınlarından birinin yaralarını birlikte sarmak için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Gel, gör, koru” diyerek tüm İzmirlileri davet ettiği buluşmanın detayları netleşti. 30 [ပို ... ]
နိုင်ငံတော်ကောင်စီရဲ့ကျောက်မိုင်း '' Stop '' tccd'n ဟုသူကဆိုသည်
Menemen TCDD အဆိုပါ Izmir အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့ရုံးကကိုဖန်ဆင်းကျောက်မိုင်းဆုံးဖြတ်ချက် Izmir3'' EIA ကိုမလိုအပ်ပါ '' စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာတရားရုံးဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။ ကြောင်း TCDD ဘာသာရပ်၏ထိပ်တွင်ပေမယ့်, နိုင်ငံတော်ကောင်စီမေတ္တာရပ်ခံဒေသခံ [ပို ... ]
Izmir တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်Tunç Soyer နှင့်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဒေါက်တာ မစ္စတာ Grant က Gokce, အလံတနင်္ဂနွေအချိန်ပိုအတွက်လမ်းများခရီးထွက်ခဲ့ဖူးတယ်။ အလံမြို့တော်ဝန် Serdar စန္ဒကူးဒုအိမ်၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့်သက်ဆိုင်ရာမန်နေဂျာနှင့်အတူ [ပို ... ]
အဆိုပါက Metro ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကိုခေါ်ဆောင်သွား Izmir, Buca ၏အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစားပေးစီမံကိန်းများကို။ Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်Tunç Soyer, သူတို့ကငါးနှစ်အတွင်း Buca Metro န်ဆောင်မှုများဖွင့်လှစ်ဖို့ရည်ရွယ်ကြသည်ဟုဆိုသည်လာမည့်နှစ်တွင်ဆောက်လုပ်အလုပ်စတင် [ပို ... ]